Doorashada Mareykanka 2020: Waa kuma Joe Biden? - Muddo 50 sano ah raadinayay madaxtinimada Mareykanka
Saturday November 07, 2020 - 23:32:30 in Wararka by Mogadishu Times
Waa musharax ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, kaas oo Donald Trump uga guuleystay doorashada, wuxuuna noqonayaa madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka. Sida ay sheegayaan taageerayaashiisa, wuxuu muddo tobonaan san
Waa musharax ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, kaas oo Donald Trump uga guuleystay doorashada, wuxuuna noqonayaa madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka. Sida ay sheegayaan taageerayaashiisa, wuxuu muddo tobonaan sano ah ka soo shaqeeyay siyaasadaha arrimaha dibadda, waana nin aftahan oo soo jiidan kara dadka caadiga ah. Waxaa lagu tilmaamay nin geesi ah oo u adkeystay dhibaatooyin soo maray noloshiisa, wuxuuna muddo 50 sano ku dhow u ordayay siduu madaxweyne uga noqon lahaa Mareykanka. Halka dadka dhaleeceeya siyaasaddiisa ay ku sheegaan in uu yahay nin u nugul jeedinta hadallada khaladaadka badan uu ka muuqdo.
Joe Biden oo da' yar xilli uu ku sugnaa kursigiisa 1970s
Biden kuma cusba ololaha doorashada - Wuxuu halgankiisa siyaasadeed ka soo bilowday magaalada Washington, xilligaas oo uu ku biiray Aqalka sanetka, sanadkii 1973-dii, oo hadda laga joogo 47 sano, halka ololaha doorashada madaxtinimada uu bilaabay sannadkii 1987-dii oo haatan laga joogo illaa 33 sano.
Joe Biden waa nin aftahan oo mararka qaarkooda jeediya hadallo muran badan dhaliya
Marka uu ka qeyb galayo isu soo baxyada siyaasadeed Biden wuxuu ku anddacoodaa: "Awowyaashey waxay ka shaqeyn jireen goob dhuxusha laga qodo oo ku taalla waqooy bari Pennsylvania," wuxuuna si caro leh u sheegaa in aysan helin fursadahii ay mudnaayeen in la siiyo.
Si uu u xoojiyo danahiisa siyaasadeed, wuxuu sannadkii 2012-kii dad ka qeybgalayay isu soo bax u sheegay: "Waxaan idiin sheegayaa, in aan garanayo ilaa siddeed madaxweyne, saddex ka mid ah waxaan naga dhexeeyay xiriir dhaw".
Biden wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladdii Barack Obama
Wuxuu nasiib u yeeshay in uu madaxweyne ku-xigeen u noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah, Barack Obama, wuxuuna ku tilmaamay in uu yahay "qofkii ugu horreeyay oo Afrikaan Amerikaan ah oo reer magaal ah oo aftahan ah oo maskax leh"
Joe Biden oo sawiro la qaadanayaa taageerayaashiisa
Biden wuxuu toddob jeer ku guuleystay doorashada kursiga senetka ee Mareykanka
"Wuxuu ku dhawadaa in uu laabta geliyo, isaga oo la hadlaya ama si toos ah ula macaamilayaa," ayuu yiri xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka, Joe Biden oo la hadlayay jariiradda New Yorker.
Joe Biden waxaa marar badan loo jeediyay eedeymo ku saabsan hab dhaqankiisa
Siddeed haween ah ayaa sannadkii la soo dhaafay Biden ku eedeeyay in uu kula kacay falal anshax xumo, sida in uu laabta geliyay ama uu dhunkaday. Warbaahinta Mareykanka ayaa baahisay Biden oo haweenka salaamaya isagoo aad ugu dhaw - mararka qaarna wuxuu sanka saartaa timahooda.
Biden oo eedeymahaas ka jawaabayay wuxuu ballan qaaday "in uu noqonayo qof feejigan" marka uu dadka la kulmayo.#
Mareykanka ma wuxuu wajahayaa "qalalaase siyaasadeed" oo la xiriira xilka madaxweynaha?
Dadka Mareykanka oo galay xaalad ay ku tilmaameen "mid cakiran"
Biden wuxuu beeniyay eedeymaha loo jeediyay oo uu sheegay "in arrintaas aanay dhici karin".
Barack Obama iyo Joe Biden
Joe Biden wuxuu markii ugu horreysay xilka madaxtinimada u tartamay sanadkii 1987-dii
Siyaasiyiinta xisbiga Jamhuuriga waxay soo qaataan hadal hore uga soo baxay xoghayihii gaashaandhigga dowladdii Obama oouu yiri: "Biden wuxuu khalad ka sheegi jiray ku dhawaad dhacdo kasto weyn oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda, in ka badan 40 sano".
Joe Biden oo xaaskiisa Nelia kala qeyb galaya xuska dhalashadeeda sanadihii toddobaatamaadkii